Iingcebiso zokuFunda kwisikolo samabanga aphakamileyo phesheya 2022
Julayi 17, 2021 U-Okpara Francis
Xa ukwishumi elivisayo, ujongene nowona mbuzo ubalulekileyo ngobomi bakho kunye nethemba labo ngekamva- ufuna ukwenza ntoni xa kugqitywa isikolo? Esi sihlandlo sisizathu sokuba ulutsha luqale ukuba nexhala ngemisebenzi yabo kwaye bajonge ukhetho njengokufunda kwelinye ilizwe.
Iinkqubo zamabanga aphakamileyo ezingaphandle kwelizwe lakho ziyinto enomdla nenesibindi eya kuthi ikufundise okuninzi ngobomi obungenakho ukufundelwa. Isikolo samabanga aphakamileyo esimiselwe kwangaphambili kunokuba lula kwaye kube mnandi, kodwa sikulungele kwaye asinakho ukubonakaliswa okufunekayo ukukhula ebomini.
Ukuba ufuna ukunyusa iinzame zakho kwaye ushukumise i-intshi usondele kwiinjongo zakho ezinkulu zomsebenzi, kuya kufuneka Nxibelelana nesemester yamabanga aphakamileyo kwiinkqubo zamanye amazwe ukwazi okungakumbi malunga nabo kunye nendlela abanokukunceda ngayo.
Nazi ezinye zezinto ekufuneka uzigcine engqondweni xa uceba ukufunda kwisikolo esiphakamileyo phesheya.
Chonga iinjongo zakho
Ngaphambi kokuba uqale nokujonga iinkqubo phesheya, kuya kufuneka uvavanye iinjongo zakho. Kutheni ufuna ukuyenza ngaphandle kwelizwe lakho? Zeziphi izakhono ofuna ukuzifunda? Buza imibuzo efanelekileyo malunga nethemba onalo lokuzuza kuloo mava aya kukunceda ukhethe inkqubo elungileyo.
Uyakufuna kwakhona ukuthatha amalungiselelo okwenziwa kwengqwalaselo. Umzekelo, unexesha elingakanani? Ngaba unayo i-semester kuphela okanye ungafunda unyaka opheleleyo? Ngaba uxhomekeke kwizifundi okanye unako ukuzixhasa ngemali kwimfundo yakho? Njengoko uvavanya ezi zinto, khumbula izibonelelo zokufunda kwisikolo esiphakamileyo phesheya.
Yazi indawo oya kuyo
Nje ukuba uchaze iinjongo zakho, inyathelo elilandelayo kukubeka imephu iinjongo zakho kwaye uthathe amanyathelo okuqala kwicala elifanelekileyo.
Kuya kufuneka uqale ukhangele iinkqubo ezihambelana neenjongo zakho. Ezinye iingcali zincoma ukwenza ispredishithi ukukunceda unciphise ukukhangela kwakho. Unokuthetha nabacebisi ngamakhondo omsebenzi ukuze wenze isigqibo esifanelekileyo.
Ngoku ukuba ugcwalise kwaye wagcina ispredishithi ngazo zonke iinkqubo zokufunda kwisikolo esiphakamileyo, lixesha lokuba uzithelekise kunye ukuze wazi ukuba yeyiphi ekunika ukubonakaliswa okuphezulu kwaye ikusondeze kufutshane neenjongo zakho zomsebenzi. Eyona ndlela yokwenza oko kukuthetha nabantu.
Unokunxibelelana nealumni okanye ujonge uphononongo olukwi-Intanethi ukuqonda ukuba le nkqubo ibandakanya ntoni kwaye ibancede njani abanye. Kuya kufuneka ujonge ukhetho olunokukunceda uhlawule unyaka okanye isemester phesheya.
Beka iimali zakho kunye
Imfundo yamanye amazwe nakweliphi na inqanaba kunokuba yinto ebizayo. Nangona kunjalo, ngocwangciso olululo, kunokwenzeka ukuba luyenze isebenze ngokwasezimalini. Yijonge njengotyalo-mali kwikamva lakho kwaye ugcine engqondweni ukuba akukho sixa semali sinokubetha olu hlobo lwamava.
Nangona kunjalo, umbuzo ngulo-uza kuyihlawula njani? Ngokuchasene nenkolelo eqhelekileyo, ukhetho lokuhlawulela isikolo sakho samabanga aphakamileyo alukho mbi njengoko lunokubonakala.
Unokucela abazali bakho ukuba bayixhase okanye baqwalasele ukuthatha imisebenzi yesingxungxo ukugcina imali yokufunda. Ezinye iinkqubo zide zikuvumele ukuba ufake isicelo sobufundi ukuba ungumfundi ophumeleleyo.
Nje ukuba iziseko ziphume endleleni, lixesha lokwenza isicelo sokugqibela. Qinisekisa ukuba inkqubo iyazifezekisa iinjongo zakho kunye neemfuno zebhajethi. Ukuphonononga ngokupheleleyo isicelo sakho asinazimpazamo ukuze kuqinisekiswe ukusebenza kakuhle.
Inokuba ngumzuzwana ngaphambi kokuba uve kubo. Ke yiba nomonde kwaye uqhubeke nokufaka isicelo de ube uyaphumelela.
Ngoku ungene, lixesha lokuba ucwangcise uhambo lwakho. Uya kudinga ukuhlela iinkcukacha ezininzi, ezinje ngokugonywa, i-inshurensi, iinkcukacha zebhanki, ipasipoti, ivisa, amatikiti endiza njl.
Yenza uluhlu lwezinto zonke ekufuneka uzenzile ngaphambi kokuya kwi-adventure yakho enkulu.
Ukuthintela ukuziva ngathi uyaphazamiseka ngaphambi kokuba upakishe, kuya kufuneka uphande indawo oya kuyo ukuze wazi izinto oza kuzifuna. Kuya kufuneka uzifundise malunga namasiko aqhelekileyo kunye nokunxiba ngokufanelekileyo. Qiniseka ukuba ujonga umcebisi wenkqubo yakho ukuze wazi ifayile ye- Uluhlu lwezinto ezicetyiswayo.
Landela nje la manyathelo okwenza ukuba inkqubo yakho yesicelo ibe mpuluswa kwaye ingoyiki kangako. Ngelixa kulungile ukuba wonwabe kuhambo lwakho, kubalulekile ukuba ugcine iinjongo zakho engqondweni kwaye wenze uninzi lwamava akho esikolo aphakamileyo phesheya. Ukuba yenziwe ngendlela eyiyo, inokuqinisa izicelo zakho zekholeji kwaye inyuse ikhondo lakho lomsebenzi kwicala elifanelekileyo.
Uphengululo lwe1A Uxhasiwe
Post Previous:Kutheni iimvavanyo zangaphambi kokuqeshwa zezona Zixhobo zokuBona eziBalulekileyo kwiLizwe lePost-COVID
Okulandelayo Post:Zithini iindidi ezahlukeneyo zengqondo kunye nendima yabo
Pingback: I-Diploma yeSikolo samaBanga aPhakamileyo esi-15 esiPhezulu esiQinisekisiweyo kwi-Intanethi 2022
NgoSeptemba 2, 2021 kwi-2: 53 pm
NgoSeptemba 2, 2021 kwi-2: 48 pm
Ndonwabile ndindwendwela le ndawo..enkosi